फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - साहित्य सन्ध्याको ३९८ औँ शृङ्खला
साहित्य सन्ध्याको ३९८ औँ शृङ्खला सुलसुले
साहित्य सन्ध्याको नियमित मासिक ३९८ औँ शृङ्खला साउन ४ गते शनिबार आर आर कयाम्पसको सभाकक्षमा सम्पन्न भयो । सन्ध्याका अध्यक्ष राम विनयको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त विशेष शृङ्खलाको सञ्चालन कोषाध्यक्ष गोपाल मैनालीले गर्नुभएको थियो । गोष्ठीमा वरिष्ठ साहित्यकार एवम् चिन्तक तथा देवकोटा–लुसुन साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष निनु चापागाईँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो भने अतिथिहरूमा प्रगतिशील लेखक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष मातृका पोखरेल, युद्धप्रसाद स्मृति प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष डा.फणीन्द्रराज निरौला, वरिष्ठ कविहरू कणाद महर्षि, डिल्लीराज अर्याल, रामबहादुर पहाडी, जगन्नाथ आचार्य, प्राज्ञ नर्मदेश्वरी सत्याल, कवि डा.गोविन्दप्रसाद आचार्य, प्रा.डा.खेम दाहाल, सांस्कृतिक अभियन्ता रणेन्द्र बराली, प्राज्ञ नारदमणि हार्तमछाली उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त विशेष समारोहमा प्रमुख अतिथि निनु चापागाईँले ‘आधुनिक समाजले अवलम्बन गर्नुपर्ने धर्म, संस्कार र संस्कृति’ विषयमा अत्यन्त मिहिनतापूर्वक विशद चर्चा गर्नु हुँदै विषय ज्यादै व्यापक र अमूर्त छ । संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ, सापेक्ष हुन्छ तर शाश्वत हुँदैन । हाम्रो देशमा दसओटा धर्म मानिन्छन्, हरेक धर्मका अलग अलग संस्कृति छन्, केहीका मिले पनि अलग अलग संस्कार छन् तर सहिष्णुता छ । पाश्चात्य मुलुकमा धर्मलाई सीमित अर्थमा समेटेका छन् भने हामीकहाँ धर्मको व्यापक अर्थ लगाएर मान्ने, दायित्व, कर्तव्य आदिलाई पनि धर्म भन्ने गरिएको छ । नेतृत्वले अध्यात्मवाद र भौतिकवादको समन्वय भन्नु नै गलत रहेको छ किनभने यी बिलकुल फरक कुरा हुन् । धर्म, कला, साहित्य, दर्शन आदि सामाजिक चेतनाका रूप हुन् तर अरू रूपले यथार्थको प्रतिविम्बन गरे पनि धर्मले भ्रामक प्रतिविम्बन गर्दछ । अज्ञानता, अलौकिक शक्तिको भ्रम अनि सङ्गठित भ्रमका रूपमा धर्म प्रतिविम्बन हुने गरेको छ । बुद्ध मूर्तिपूजाका विरोधी हुन् तर उनैका मूर्ति बढी छन् अर्थात् भ्रम सिर्जना गरिएको छ । धर्म भनेको मानवताविरोधी र विज्ञानविरोधी कुरा हो, यसले मानवलाई तुच्छ ठान्दछ । धर्म निरपेक्षता भनेको पनि राज्यले कम गर्नु वा धर्म नमान्नु भनेको हो तर हाम्रो संवैधानिक प्रावधान गलत छ । त्यसैगरी संस्कार धर्मअनुसार फरक छन् । आशय गलत नभए पनि प्रयोग तथा व्यवहार अनि धर्मसँग जोडिएरका कारण संस्कारहरू पनि गलत बढी छन् । रक्त, विर्य र भ्रूणलाई शुद्ध पार्ने भनिएका संस्कार वैज्ञानिक होइनन्, कमजोरीयुक्त छन् । यद्यपि षोडष संस्कारमध्ये धेरै हराइसकेका पनि छन् र केहीले विकृति फैलाएका छन् जस्तै पास्नी, तीज आदिले आडम्बर प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने जनाइपूर्णिमाको संस्कारसमेत घट्दो अवस्थामा छ । व्रतबन्धले जातै माथि उठाउने भ्रम खडा गरेको छ । तात्कालिक आवश्यकताले स्थापित संस्कारमा समय क्रमानुसार रूपान्तरण हुँदै पनि जाला भन्नुभयो ।
गोष्ठीका अध्यक्ष राम विनयले स्रष्टाले निराशा लेख्नुनहुने बताउँदै अहिलेको समाजका लागि ‘धर्म, संस्कार र संस्कृति’का बारेमा कस्तो स्पष्टता आवश्यक छ ? कस्तो संस्कार र संस्कृति निर्माण आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा बहस हुनु जरुरी ठानेर वरिष्ठ विद्वान निनु चापागाईँलाई आग्रह गर्यौँ, उहाँ आइदिनुभयो । हाम्रो निम्ता स्वीकार गरी यहाँहरू सबै आइदिनुभयो र वाचित रचनामाथि डा.लेखप्रसाद निरौलाले टिप्पणी गरिदिनुभयो । म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु, आभार व्यक्त गर्दछु र अर्काे शृङ्खलामा हामी फेरि यस्तै समसामयिक विषयमा बहस गर्नेगरी आमन्त्रण गर्ने नै छौँ भन्नुहुँदै गोष्ठीको समापन गर्नुभयो ।